Fihatsarana amin'ny fanompoana samirery | Martech Zone
Raha toa ahy ianao dia manao tsinontsinona ny fifampiraharahana amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Tsy hoe tsy tiako ny vahoaka - manao izay tsara indrindra vitany izy ireo. Fa matetika kokoa noho ny tsy izany dia fantatro bebe kokoa momba ny olana sedraina noho izy ireo. Halako ny mipetrapetraka amin'ny telefaona maharitra 5 minitra, arahin'ny fifanakalozan-kevitra mandritra ny 15 minitra, arahin'ny fiakarana ary ny fiandrasana sy fanazavana bebe kokoa.
Ny ankamaroan'ny olana dia amboariko ny tenako, na mitodika any amin'ny tamba-jotra aho hanampy ahy. Ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara indrindra, raha ny fahitako azy, dia base-base na FAQ avo lenta be izay azoko anompoana tena. Handany antsasaky ny andro aho hikaroham-bahaolana fa tsy haka ilay telefaona ratsy. Toa manaiky ny hafa.
Fa maninona no miresaka momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa amin'ny a Bilaogy marketing? Ny paikady sosialy rehetra dia manomboka amin'ny fampandehanan-tena tena tsara. Rehefa tsy manome ny fitaovana tadiavin'ny mpanjifanao ianao dia ny Internet no toerana voalohany itarainany. Io resadresaka ratsy io dia mety handentika ny fampielezan-kevitra tsara indrindra!
Sary navoaka voalohany Zenage, The Zendesk Blog
Tags: Serivisy ho an'ny mpanjifampanjifa fanohananaSary torohaysamy mikarakara ny tenanyzendesk
Fanohanana fanohanana tsy amidy ny fanahinao